सिक्किमको सबैभन्दा कम उमेरको संक्रमित निको - The Sikkim Chronicle
Jul 5, 2020 - 12:48
एसटीएनएम अस्पतालको कोभिड-19 वार्डबाट एउटा औधी खुशीको खबर आएको छ। सिक्किमका जनताले धेरै दिनदेखि राज्यको सबैभन्दा कम2वर्ष3महिना उमेरको कोभिड-19 संक्रमित नानीको स्वास्थ्यबारे पटक-पटक जिज्ञासा राख्दै आएका थिए। जुलाई4तारिक दोहोर्याइ-दोहोर्याइ गरिएको जाँचमा नानीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भएको पुष्टि भएको हो। निको भएवापत नानीलाई अस्पतालबाट छुट्टी दिइएको छ।
गत 13 जुलाईको दिन नानीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो भने तिनको आमाको रिपोर्ट चाँहि नेगेटिभ आएको थियो। त्यसतै अर्की एक3वर्षको नानी भएकी एक आमाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो भने नानीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। यसरी एकातिर आमा मात्रै पोजिटिभ अर्कोतिर नानीमात्रै पोजिटिभ आएपछि आमाहरुले आपस्तमा एका-अर्काको नानीको देखभाल गर्ने निर्णय गरे। पोजिटिभ आमाले अर्की नेगेटिभ आमाको पोजिटिभ नानीको एसटीएनएम कोभिड अस्पतालमा देखभाल गरिन् भने तिनको नेगेटिभ नानी नेगेटिभ पाइएकी महिलाले क्वारेन्टाइनमा देखभाल गरिन्।
स्वास्थ्य विभागको यो पहलले धेरैको मन छोएको थियो। त्यसपछिनै सबैले संक्रमित नानीको स्वास्थ्यबारे लगातार सोध्न थालेका हुन्। नानी जाती भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै धेरैले सामाजिक सञ्जालहरुमा खुशी व्यक्त गरेको देखियो।
स्वास्थ्य सचिव डा. पेम्पा टी भुटियाले4जुलाईको हेल्थ बुलेटिनमा थप एउटा नयाँ संक्रमण राज्यमा देखिएको जनाउनु भएको छ। हिमालयन फार्मेसी पुरुष होस्टलमा क्वारेन्टाइन बिताइरहेका एक महराष्ट्रबाट राज्यमा फर्किएका युवकमा संक्रमण पाइएको हो। संक्रमितलाई एसटीएनएम कोभिड अस्पतालमा सारिएको छ।
सो संक्रमितका सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकिएको छ अनि यथाशीघ्र सबैको जाँच गरिने जानकारी डा. पेम्पाले जानकारी गराउनु भएको छ।
Bimal Thapa Aug 20, 202001942
Bimal Thapa Jul 5, 202001551
हिन्दू वैदिक धर्म शास्त्र अनुसार भाद्र कृष्ण औंसीलाई कुशे...
SC Bureau Sep 7, 20210507
ध्रुवतारा नरबहादुर भण्डारीज्यूको तेस्रो पुण्यतिथिको विशेष...
admin Jul 16, 202004428
Bimal Thapa Aug 15, 202002312